Waa maxay sababta baaskiil wadada loo ilaaliyo - waxa la sameeyo markaad "jilbaha"
Baaskiilka wadnaha osteoarthritis iyo dhibaatooyinka wadajirka ah ee jilibka?
Goorma ayuu waxtarka jirku ku dhacaa inta lagu jiro baaskiilka?
Baaskiilku waa mid ka mid ah ciyaaraha caafimaad ee ugu adkeysta weligiis, oo ah jimicsiga wadnaha.
Firfircoonida adigu - sababta baaskiilku u ilaalin karo
Yaa saddex ilaa afar jeer daqiiqo qiyaastii 30 of xooggan oo la kulmay todobaadle ah ee lugtooda, naftiisa caafimaadka dheeraan karaa by wanaagsan toban sannadood.
Marka baaskiilku, boodboodku wuxuu ka nuugaa xNUMX boqolkiiba miisaanka jirka. Sidaa darteed, xannibmooyinka looma baahna lugaha.
Raacitaanka baaskiil ayaa kor u qaadaya taam ahaanshaha
sidaas Baaskiil sidoo kale waxay bixisaa kale oo wanaagsan in gucleynta. Gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah cayilka iyo flab ee aan la rabin saamayn ku Baaskiil faa'iidada badan.
Xoogaa 75 ah bini'aadamku wuxuu gubayaa kilinikada 720 ee xawaare dhexdhexaad ah saacad ka dib. Tani way ka fog tahay kaliya shukulaatada kaliya.
Dad badan ayaa ka cabsada in baaskiil waayeen rar carjawda ay dhibaatadu saameysey si wadajir ah lagu daro. Laakiin orthopedists siiyo oo dhan cad: soo horjeeda waa kiiska, sida la wanaajiyey by dhaqdhaqaaqa uniform of gaadiidka jilibka ee nafaqooyinka in carjawda. Sidoo kale, kaabsal oo la ogeyn xilliga lacagta wadajirka ah.
Xitaa kuwa ku xanuunaya xididdada xitaa barafka uma baahna inay sameeyaan baaskiil la'aan. Dhiiga dumarka waxaa lagu wadaa xitaa lugta lugta ee lugaha, sida bambada qalbiga. Tani waxay badanaa ka shaqeysaa daweyn kasta.
Muhiim u ah dadka qaba dhibaatooyinka dhabta ah: marwalba si taxadar leh u fiirso booska tooska ah oo doorbidaya baaskiilka Dutch ee baabuurta tartanka.
Wixii saameyn jireed oo la dareemo, waa inaad wareegto ugu yaraan laba saacadood toddobaadkii. Shaqadu waa inay sii kordhiso. Si loo xoojiyo xaalada, waa ku filan tahay in la barbardhigo bartamaha dhexe, adigoo aan neefsanayn.
Haddii xajinta ay ku jirto miisaanka, tababarka isbeddelka ayaa lagu taliyaa. Halkan xawaare aad u deg deg ah oo xawaare ah oo shan daqiiqo kasta ah. Haddii ay lagama maarmaan tahay, fasax yar ayaa la gelin karaa.
Yaa kaxeeya fogaanta fog ee xawaaraha dhexdhexaadka ah, wuxuu xoojiyaa gubashada. Sidaa darteed, baaskiilku waa cayaaraha ugu fiican ee lumiya miisaanka. Waxay si toos ah u bixisaa qaybta maalinlaha ah ee oksijiinta iyo si fudud loo dhexgalo nolol maalmeedka. Xitaa jidka shaqada iyo dukaamaysiga ayaa si madax bannaan loo xakameyn karaa tababarka baaskiilka.
Sida habka: Tababarka noocan oo kale ah wuxuu keenaa hormoonada jinsiga si tayo leh. Waxaa jira warar sheegaya in baaskiilladu yihiin kuwa jecel. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto caddayn cilmi ah oo tan oo kale ah. Sidaas darteed waa mid kasta si loo ogaado.
Isboortiga saxda ah / isboortiga iyo jirdhiska